सुनौलो बिहानी ।। Sunaulo Bihani » त्यहाँ म सिधै ल्याण्ड गर्छु जुन सगरमाथा*मा सबै चढ्न चाहन्छन् : प्रिया अधिकारी
त्यहाँ म सिधै ल्याण्ड गर्छु जुन सगरमाथा*मा सबै चढ्न चाहन्छन् : प्रिया अधिकारी
३१ वर्षकी प्रिया अधिकारी नेपाल*की एकमात्र महिला उद्धार पाइलट हुन् । प्रिया सगरमाथा*को उचाइभन्दा माथिको उचाइमा हेलिकप्टर उडाएर मानिसहरुको ज्यान बचाउँछिन् र त्यहाँ पुगेका सहयोगीलाई सहयोग गर्छिन् । प्रिया डाक्टर बन्न चाहन्थिन् तर एउटा भेटले उनलाई पाइलट प्रेरित गर्यो । उद्धार पाइलटको जुन जिम्मेवारी छोडेर आधा दर्जन युवती*हरु भाग्छन् उनले त्यही करिअर रोजेकी छिन् ।
प्रिया ३० जना पुरुषको टिममा एक्ली महिला हुन् । उनले ९ वर्षको समयमा सगरमाथा*को आसपासबाट १ हजारभन्दा बढीलाई उद्धार गरिसकेकी छिन् । प्रिया अधिकारीसँग भारतीय मिडिया दैनिक भास्करले कुराकानी गरेको छ । दैनिक भास्करकी पत्रकार उपमिता वाजपेयीले आफ्नो मिडियाको लागि प्रिया अधिकारीसँग गरेको अन्तरवार्ता यहाँ अनुवाद गरिएको छ ।
हाइस्कुलको पढाइपछि म मेडिकल कक्षामा भर्ना हुनको लागि भारत (आन्ध्र प्रदेश) पुगेकी थिएँ । त्यतिबेला भर्नाको प्रक्रिया चलिरहको थियो तर घरबाट फोन आयो । भर्नाको प्रक्रिया चलिरहेको थियो तर घरबाट फोन आयो कि आमाको स्वास्थ्य खराब छ । त्यपछि म फर्कनु पर्यो । आमालाई सन्चो भएपछि मैले काठमाडौंमै बुद्ध एयरलाइन्समा क्याबिन क्रुको जागिर गर्न थालें । त्यही क्रममा बीएस्सी गरे अनि एमबीए पनि । एक दिन कसैले मेरो दाइलाई आफ्नो साथीसँग भेटाए । उनी हेलिकप्टर पाइलट थिए । उनले मलाई साथमा उडानमा लैजान चाहे, म तयार भएँ । यो मेरो पहिलो हेलिकप्टर उडान थियो । घर आएर मैले आमासँग भनें बरु म ऋण लिन्छु तर पाइलट नै बन्छु । पहिलो उडानको ४ महिनापछि नै मैले हेलिकप्टर उडाउँदैछु ।
एक्ली महिला, जंगल पहाडमाथि कसरी उड्न सक्नुहुन्छ ? कसैले केही भनेनन् ?
सगरमाथा*की एक्ली उद्धार पाइलटले संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखरलाई कसरी हेर्छिन् ?
सगरमाथा*मा जानु बच्चाको खेल होइन । तर म कैयौं पटक यता आरोहीसँग भेट्छु जो केही सोचविचारै नगरी यहाँ आउँछन् । म आफैं कहिल्यै सगरमाथा आरोहण गर्न चाहन्न । तर मलाई खुसी छ कि जहाँ सबै चढ्ने चाहन्छन् म त्यहाँ सिधै ल्याण्ड गर्छु ।
एकपटक १४ हजार फिट उचाइमा बेस थियो । त्यहाँ ५०० किलो सामान पुर्याउनु थियो । सामान अफलोड गर्नको लागि कोही क्रु पनि थिएनन् । अर्थात पाइलट पनि म र सामान चढाउन र ओराल्न पनि मेरै जिम्मा । त्यसपछि २०१५ मा नेपालमा भूकम्प जाँदा ३ महिनासम्म दैनिक १०–१० राउण्ड लगाएकी थिएँ ।
प्रकाशित मिति September 7, 2019
९ बर्षकी सानी नानी पानी बेच्दै..,मुटु रोगी आमा बचाउन लाई
नायिका बेनिशा हमाल जीवन साथीको खोजीमा छिन्
दुवै खुट्टा चल्दैन मान बहादुरको..,सडकमा माग्न बसेका मान बहादुर*ले पाए भगवान जस्ती श्रीमती !
आज बिहिबारको राशिफल पशुपति नाथको दर्शन गरि हेर्नुहोला
कान्छि लिएर घर आउ संगै मिलेर बसौ..,श्रीमानले छोडे*पछि राजमार्गमा गाडी चलाउने निडर महिला !
रातभर सडकमा पुग्ने गरेकी छिन् रेणु दाहाल…
हार्दिक बधाई : नेपाली सेनालाई स्वर्ण पदक बेलायतमा भएको ३४ देशको सैन्य अभ्यासमा..,सम्मान गर्नुहोस्
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हेलिकप्टरमा विमानस्थल गए पनि सडक उस्तै जाम…
पारस तिमी लेजेन्ड हौ भने : सन्दीप लामिछानेले
भोलि बिहिबारको राशिफल नाग देवतालाई दर्शन गर्दै हेर्नुहोस्
मुस्कान खातुनलाई भेट्न राष्ट्रिय क्रिकेट टिम अस्पताल पुग्यो !
नेपाली चेली बोनिता शर्मा बिबिसीको शाक्तिशाली महिलाको सूचीमा..,हार्दिक बधाई
राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले ५ मिनेट लाग्ने वाटोमा हेलिकप्टरको प्रयोग…
कोहलपुर*का डिएसपी शाही जनताको मन जित्दै…
पशुपतिनाथ मन्दिरमा करिब ४५ किलो सुन फेला पर्यो !
आज बुधबारको राशिफल सुपा देउराली मन्दिरको दर्शन गरि हेर्नुहोला